Mogadishu Journal » 2021 » September » 3
Midowga Musharaxiinta oo ugu baaqay Rooble in uu qaado Sadex talaabo oo ku aadan Dilka Ikraan Tahlil
Midowga Musharaxiinta ayaa War saxaafadeed ay soo saareen waxa ay uga hadleen dilka iyo afduubka loo geestay Ikran Tahliil oo katirsaneyd Hay,aada Nabad Sugida Soomaaliya. Musharaxiinta ayaa ugu baaqay Ra’iisul Wasaare Rooble inuu qaado saddex tallaabo oo ay kamid yihiin in uu...
Lionel Messi ayaa kula guulaysan doona Champions League kooxda Paris Saint-Germain ka hor inta uusan ka fariisan Barcelona, ​​sida uu sheegay saaxiibkiisii ​​hore Juan Roman Riquelme. Messi ayaa ku biiray kooxda ka dhisan Ligue 1 heshiis labo sano ah bishii la soo dhaafay ka dib...
The shape the Taliban government will take, and who will lead, could be announced as some humanitarian flights resume. The Taliban is close to forming a government as it faces domestic and international pressure to rule Afghanistan with greater tolerance, especially on women’s...
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Masjidka Isbahaysiga Islaamka ku tukaday salaadda janaasada ee Marxuum Maxamed Cumar Saalixi oo lagu aasay Qabuuraha Sheekh Cali Suufi ee Degmada Warta Nabadda. Marxuumka oo ahaa halyey ku...
DEG DEG: Al-Shabaab oo iska fogeysay dilka iyo afduubka Ikraan Tahliil (Akhriso bayaan)
War kasoo baxay Al-shabaab ayaa lagu beeniyey hadalkii kasoo yeeray hay’adda sirdoonka DFS ee ahaa inay ka dambeysay afduubkii iyo dilkii lagula kacay Ikraan Tahliil oo ahayd Sarkaal u shaqeyneysay hay’adda NISA. Al-Shabaab ayaa intaas ku dartay inaysan ka dambeynin dilka...
(Sawirro) Wararkii ugu dambeeyey weerar Toorey oo ka dhacay dalka New Zealand
Ra’isul Wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern ayaa xaqiijisay in boolisku ay dileen nin ay ku sheegtay inuu ahaa argagixiso ka tirsan ururka Daacish. Dilka ninkan ayaa la sheegay inuu yimid ka dib markii uu toorey ku weeraray dad ka adeeganayay dukaan ku yaal magaalada Auckland,...